Xuska maalinta Raoul Wallenberg oo markii ugu horeeysay la qabtay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Siavosh Derakhti. Sawirle: privat
Xuska maalinta Raoul Wallenberg oo markii ugu horeeysay la qabtay
La daabacay tisdag 27 augusti 2013 kl 14.31
Maanta oo salaasa ah 27-ka bisha agoosto ayaa markii ugu horeeysay dalka Iswiidhen looga dabaal-degey maalinta Raoul Wallenberg, islamarkaana la bixiyey biladda abaal-marinta Raoul Wallenberg markii ugu horeeysay middaasina oo uu ku guuleeystay Siavosh Derakhti oo 22 jir ah kuna dhaqan magaalada Malmö.
- Qiimo aad u ballaaran ayay aniga iigu fadhidaa iyo dhammaan saaxiibadeyda kale. Midda keliya ee aan hadda sameeyn karnaana waxey tahay sidii aan dhallin-yarada, qaasatan kuwa iswiidhen ku dhaqan ugu dhiiri-gelin lahayn iney sii xoojiyaan la dagaalanka sidii geesi-nimo looga hor-tegi lahaa cadaadiska iyo faqooqa dadka qaarkii lagu hayo ee ka dhaca waddooyinka iyo dhanka aaladda internet-ka, sida uu sheegay.
Biladda abaal-marinta Raoul Wallenberg oo markii ugu horeeysay laga bixineyo dalkan Iswiidhen ayuu gudoonsan doonaa shakhsi ku taagan dhabbadii howlaha ee Wallenberg iyo sidii kor loogu qaadi lahaa wacyiga dhallaanka iyo dhallin-yarada ee la xiriira falalka faqooqa. Waana mid la oran karo tallaabooyinka hoowlaha uu ku tallaabsaday 22 jir ku dhaqan magaalada Malmö Siavosh Derakhti oo muddo iminka saddex sannadood ey ka soo wareegtay keli-nimo ku bilaabay urur uu ugu magac-daray ”Unga muslimer mot antisemitism – dhallin-yarada muslimiinta iyo ka hortagooda falalka faqooqa ee loo geeysto dadyoowga ka soo jeeda qowmiyadda Yuhuudda, waxa loo yaqaanno antisemitism”. Isagoona intaa ku daray in abaal-marinta iyo dhaqaalaha 100 000 oo koroniba yihiin kuwo sharaf u ah ee loogu barbar-dhigeyo howlihii uu soo qabtay Wallenberg:
- Waa mid i gelineeysa kalsooni iyo tamar hor leh sidii aan dhallin-yaro intaa ka badan ku gaarsiin lahaa ra’yiga ah la dagaalanka faqooqa iyo cunsuriyadda noocuu-doonaba ha ahaadee ee ka aloosan Iswiidhen.
Waana howsha uu guddigii go’aankan gaarey ku macneeyay inuu ku tallaabsaday Siavosh Derakhti.
Muddo iminka ay ka soo wareegtey saddex sannadood ayuu Siavosh Derakhti furay urur uu keli ku yahay, midkaasina ugu magac-daray "Unga muslimer mot antisemitism", falkaasina oo ka dambeeyay weerarro lagu qaadey dad ka mid ah qoowmiyadda Yuhuudda ee ku dhaqan Malmö. Ururkii ayaa maanta howshiisii iminka sii kordhiyay oo yeeshay agac hor leh ” "Unga mot Antisemitism & Främlingsfientlighet – dhallin-yarta ka soo hor-jeedda neceeybka qowmiyadda Yuhuudda iyo neceeybka ajaaniibta". Waxaa la qabtaa aqoon-kororsiyo, kulammo wax la isku weydaarsaneyo, qaasatan iskuullada, carruurta iyo dhallin-yarada, macallimiinta, siyaasiyiinta iyo shaqaalaha hayadaha kala duwan. Iyada oo goolka laga leeyaheyna uu yahay sidii kor loogu qaadi lahaa wacyiga is-fahanka qowmiyadaha kala duwan ee ku dhaqan Malmö. Hase yeeshee ey fal-celinnadii laga bixiyey hoowlahaasi ahaayeen qaar kala duwan, sida uu sheegay Siavosh Derakhti:
- Iminkadan waxaan heleyaa oo keliya hambalyooyin wanaagsan, waxaase xaqiiq ah iney na soo gaareen hanjabaadyo iyo qoraallo cabsi-gelin ah oo qudheeyda i soo gaaray. Hase yeeshee maaha wax i cabsi gelinaya ee waa inaan halganka halkiisaa ka sii wadaa. Midda ugu xun-na waxay tahay kolkii laga aamuso dhacdooyinka. Mana ahan wax la ogolaan karo. Waa inaan si wada-jir ah u halgannaa. Waana midda keliya ee horay loogu socon karo.
Waa muhiim in masuuliyad la iska qaado, sida uu sheegay Siavosh Derakhti. Falalka geesi-nimadu ku dheehan tahay ayaa dalka Iswiidhen ku yar maanta:
- Waa midda aan aamin-sanahay. Waxaa bulshada ku yar geesi-nimada. Dhanka kale waxaan rabaa inaan hor-seed u noqdo dadka kale iyo sidii aan fikirradeyda ku gaarsiin lahaa dhallaanka iyo sidii ey horay ugu sii qaadi lahaayeen fikirkaa. Waa in magaalada Malmö aad iyo aad kor loogu soo qaado dhiirashada leh geesi-nimada.
Abaalmarintan ayay bixisaa akadeemiyada Raoul Wallenberg, iyada oo laga leeyahey goolka ah sidii loo iftiimin lahaa ardeyda dhigata dugsiyada sare aqoonta la xiriirta halgankii iyo wax-qabadkii Wallenberg.